Iziselo (zeeprotein zezityalo, iti, ikofu) mveliso - China iziselo (iziselo zeprotheyini iziselo, iti, ikofu) abavelisi kunye nabaxhasi
Iziselo (IProtini yeZiselo, iZiselo, iTi, iKofu)
Ukuntywiliselwa emanzini ukusebenzisa itekhnoloji yokutshintsha kokuhamba kolwelo okuphucukileyo ukuphucula ukufana kweqondo lobushushu ngaphakathi kwenqanawa yokubuyisa. Amanzi ashushu alungiselelwe kwangaphambili kwitanki yamanzi ashushu ukuqala inkqubo yokuvalwa kwenzalo kubushushu obuphezulu kunye nokufezekisa amaqondo obushushu akhawulezayo anyukayo, emva kokuvalwa kwenzalo, amanzi ashushu aphinda asetyenziswe kwaye atshizwa abuyele kwitanki lamanzi ashushu ukufezekisa injongo yokonga umbane.
Ukuqhubeka kokugcina inzala ngokungagungqiyo kuye kwahlula izithintelo ezahlukeneyo zetekhnoloji kwishishini lokucoca inzalo, kunye nokukhuthaza le nkqubo kwintengiso. Inkqubo inendawo yokuqala yobuchwephesha, itekhnoloji ephezulu, ukusebenza kakuhle kwenzalo, kunye nolwakhiwo olulula lwenkqubo yokuziqhelanisa emva kokubola. Iyakwazi ukuhlangabezana nemfuno yokulungiswa ngokuqhubekayo kunye nemveliso emininzi.
Isitshizi sokujikeleza kwenzalo esitshiza amanzi sisebenzisa ukujikeleza komzimba ojikelezayo ukwenza imixholo iqukuqeleke kwiphakheji. Fudumeza kwaye upholise ngumtshisi wobushushu, ke umphunga kunye namanzi okupholisa awayi kuyingcolisa imveliso, kwaye akukho khemikhali zonyango lwamanzi ezifunekayo. Inkqubo yamanzi itshizwa kwimveliso ngempompo yamanzi kunye nemilomo esasazwa ekubuyiseleni ukufezekisa injongo yoxinzelelo. Ukushisa okuchanekileyo kunye nokulawulwa kwengcinezelo kunokufanelekela kwiintlobo zeemveliso ezipakishwe.
Umphunga kunye nokujikeleza okujikelezayo kukusebenzisa ukujikeleza komzimba ojikelezayo ukwenza imixholo ukuba ihambe kwiphakheji. Kuyinxalenye yenkqubo yokuba wonke umoya ukhutshwe kwindawo yokubuyisa ngokuzalisa isikhephe ngomphunga kunye nokuvumela umoya ukuba uphume ngeevalvu zomoya. inqanawa nangaliphi na ixesha ngalo naliphi na inyathelo lokubulala iintsholongwane. Nangona kunjalo, kunokubakho uxinzelelo lomoya olusetyenzisiweyo ngexesha lokupholisa ukukhusela ukukhutshwa kwesikhongozeli.
I-Steam Retort egcwalisiweyo yeyona ndlela indala yokubulala inzalo esityeni esetyenziswa ngabantu. Kwitoti yokufaka inzalo, lolona hlobo lulula nolunokuthenjwa lokubuyisa. Kuyinxalenye yenkqubo yokuba wonke umoya ukhutshwe kwindawo yokubuyisa ngokuzalisa isikhephe ngomphunga kunye nokuvumela umoya ukuba uphume ngeevalvu zomoya. inqanawa nangaliphi na ixesha ngalo naliphi na inyathelo lokubulala iintsholongwane. Nangona kunjalo, kunokubakho uxinzelelo lomoya olusetyenzisiweyo ngexesha lokupholisa ukukhusela ukukhutshwa kwesikhongozeli.